ရွှေလီသား: မှတ်မှတ်ရရသင်္ကြန်ကာလ(၂၀၀၈)အပိုင်း (၂)
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ထားဝယ်ကနေသုတ်ခြေတင်ပြီးတပ်မကိုသတင်းပို့ ဖို့လုပ်ရပြန်တယ်။တော်သေးတယ်ကံကောင်းချင်တော့ဘဏ်တွေကပိတ်ဖို့တစ်ရက်အလို။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲကပါလာတဲ့သူငယ်ချင်းတစ် ယောက်က ရန်ကုန်ကသူ့အိမ်ဆီဖုန်းဆက်ပိုက်ဆံမှာပြီးချက်ခြင်းစောင့်ထုတ်လို့ရလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့အငတ်ဘေးမှ ခေတ္တဝေးကွာခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကော့သောင်းထိ အမြန်ရေယာဉ်စီးရဖို့အရေး စကခ (၈)မှာ လက်မှတ်သွားလုပ်ရတယ် ညနေ ၄နာရီလောက်ထဲကလက်မှတ် ထိုးဖို့စောင့်လိုက်ရတဲ့ အရာရှိအကိုကြီးတစ်ယောက် ည၁၁နာရီကျော် လောက်မှ ရောက်လာတယ်။ သြော်. ဒါကလဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လဲဥာဏ်မမှီတော့ မစဉ်းစားတတ်ပြန်။ထားဝယ်ကနေအမြန် ယာဉ်ဆိုဒ်တဲ့ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းကိုရောက်ဖို့ ကားကို ၃နာရီလောက်စီး ရတယ်။ဒါနဲ့ကားစီးဖို့ ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပြန်တယ် ကားကလဲ ည ၁နာရီခွဲ ၂ နာရီလောက်ထွက်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အိပ်မနေတော့ ဘူးဆိုပြီး ထားဝယ် ခလရ (၂၅)တပ်မှာ ကျွန်တော်တို့ခတ္တအပ်ထားတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ ထုတ်ပြီးထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းကိုထွက်မဲ့ကားဂိတ် မှာ မိုးကာစလေးကိုခင်းပြီး ခဏစောင့်နေလိုက်တယ်။ကားဂိတ်ဆိုပေမဲ့ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပါ ပဲ။၁နာ၇ီခွဲလောက်တော့ ကားရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အလကားရတဲ့ကားခေါင်မိုးပေါ်တက်စီးရင်း၃နာရီခွဲ၎နာရီလောက်မှာထားဝယ်အမြန်ယာဉ်ဆိပ်ကမ်းကို ရောက်တယ်။၄နာရီဆိုရင် အမြန်ယာဉ်ကလဲထွက်တော့မှာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ယာဉ်ပေါ်မှာပဲတက်ထိုင်နေလိုက်တယ် ဘာမှတောင်မ၀ယ်စားနိုင်ပါဘူး ဘဏ်ကထုတ်ထားတဲ့ပိုက်ဆံကလဲ တပ်မကိုသတင်းပို့ပြီးရင် ထပ်ဆက်ရမဲ့ခရီးတွေအတွက်ကချန်ထားရသေးတာကိုဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တုတ်တုတ်ဖိုးနဲ့လမ်းမှာထမင်းဖိုးနဲ့ပိုက်ဆံကမကျန်တော့ဘူး လေ။အခက်အခဲမြောက်များစွာကိုကျော်ဖြတ်ပြီး တပ်မကိုဆိုဒ်ဆိုဒ်မြိုက် မြိုက်ရောက်လို့လာခဲ့တော့တယ်။တပ်မ G3ကိုသတင်းပို့ပြီးပါလာတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတပ်ကိုအပ်ဖို့ကကျန်သေးပြန်ရော။တပ်မနဲ့ကျွန်တော့်တပ်ကမိုင်သုံးလေးဆယ်လောက်ဝေးသေးတယ်။
တပ်ကို ရောက်ဖို့ကားကြုံကို ၁ပတ်တိတိစောင့်လိုက်ရတယ်။အဲဒီလောက်အထိလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကကောင်းမွန်တဲ့အရပ်ဒေသပါ။တပတ်လုံးတပ်မ နားကသူငယ်ချင်းတပ်မှာရိက္ခာတွဲစားရင်းနေခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော့်တပ်ကိုရောက်လက်နက်ခဲယမ်းအပ်ပြီး အမြန်ပြန်ထွက်နိုင်ဖို့တပ်ရေးဗိုလ် ကြီးအကိုကြီးထံတင်ပြ တယ်။တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးကလဲ ညီလေးတို့အဆင် သင့်ဖြစ်ရင်ထွက်ပါ လို့ပြောတော့ ရှိတဲ့ပစ္စည်လေးတွေထုတ်ပိုးပြီး ကား ကြုံ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်ကယ်ကြုံဖြစ်ဖြစ်စောင့်လိုက်တာ၂ရက်တိတိမြောက်တဲ့နဲ့မှာပဲဆိုင်ကယ်ကြုံတစ်စီးနဲ့တပ်မထိလိုက်လာရတယ်။တပ်မကနေမှ အမြန်ယာဉ်လက်မှတ်ကိုစောင့်ယူရင်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတို့ကော့သောင်းကမ်းကနေစခွာလာတော့တယ်။ရေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင်ထမင်းနှစ်ဗူးဝယ်တယ် တစ်ဗူးကိုနှစ်ယောက်ခွဲစားပြီးကျန်တစ်ဗူးကိုလမ်းမှာစားဖို့လုပ်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားရမဲ့ခရီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာရှိတဲ့ငွေနဲ့ကခရီးဆုံးရောက်ဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့မှန်းသိတော့ရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးပဲချွေတာပြီးသုံးရတာပေါ့။တော်သေးတယ် အမြန်ယာဉ်အတွက်အလကားစီးရအောင်စီစဉ်ပေးထားတာပဲအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါမိပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လစာငွေနဲ့ ဒီလမ်းဒီခရီးတွေသာဒီလိုမစီစဉ် ပေးထားလို့ကတော့ လစာတောင်သုံးရဖို့မမြင်။
ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ရည်မှန်ချက်ကြီးစွာထားလာတဲ့သင်္ကြန်မိသားစုတွေ့ ဆုံဖို့အရေးမျှော်တိုင်းဝေးရပြန်ပီဆိုတာနားလည်လိုက်တယ်။ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းကိုအမြန်ယာဉ်ပြန်ကပ်တဲ့နေ့က အင်္ကြန်အကြိုနေ့ဗျာ မှတ်မှတ်ရရ ကားခေါင်မိုးဒါပေမဲ့ဗျာ စိတ်တော့မလျော့ဘူး သင်္ကြန်မရောက်တော့လဲ တစ်ရက်ပဲအမေနဲ့တွေ့ ရတွေ့ရဆိုပြီးစိတ်ကတော့မလျော့ဘူး သင်တန်းကိုသတင်းပို့ရမဲ့မတိုင် ခင်အရောက်ပြန်မယ်ဆိုပြီးအားခဲလာလိုက်တာထားဝယ်ကနေရထားနဲ့လိုက် ရေး မြို့ဘူတာရုံထဲမှာတစ်ညအိပ် တဲ့နေ့ကကျွန်တော့်ရဲ့သင်္ကြန်အကျနေ့ရထားတွဲထဲကိုပက်ပက်ထည့်လာတဲ့ကလေးတွေရဲ့သင်္ကြန် ရေလေးများစိုအောင်ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးထိုင်ပစ်တယ်။ရထားကရန်ကုန်ဘူတာမှာည ၁၀နာရီကျော်ကျော်လောက်မှဆိုက်တယ်။ငွေကရေသန့်ဗူးတစ်ဗူးဖိုးနဲ့၅၀တန်အနွမ်းလေးတစ်ရွက်ပဲရှိတော့တယ် သင်္ကြန်တွင်း ဆိုတော့ ဘဏ်တွေကလဲပိတ် ရေသန်ကဗူးလေးတစ်ဗူးဝယ် နှစ်ယောက် သားသောက်ပြီးဘာလုပ်ရမယ်မှန်းကိုမသိတော့ဘူးည၁၀နာရီလောက်ကြီးရန်ကုန်ဘူနာကြီးမှာ နှစ်ယောက်သားငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း..notebookလေးကိုလန်လှောကြည့်နေရင်းနဲ့ရန်ကုန်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့လိပ်စာတွေလို့ တော်သေးတယ် သူ့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပိုက်ဆံချေးလိုက် တော့မှကျွန်တော်တို့ဝမ်းရေးအတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွား တယ်။သူငယ်ချင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းမိဘတွေကိုအရမ်းပဲကျူးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ အကူအညီကိုရလိုက်တာပါ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးရထားနဲ့သင်္ကြန်အကြပ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ကြီးစီးလိုက်ကြရတယ်။ရင်ထဲမှာတော့အိမ်မှပြန်ဖို့အချိန်မှီပါ့မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့။လမ်းမှာငတ်လာတဲ့အရှိန် ကြောင့်လားတော့မသိရထားပေါ်လာရောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်ဝယ်စား ပစ်တယ်ဗျာ။မန်းလေးရောက်တော့သူငယ်ချင်းအိမ်ကမန္တလေးနားဆို တော့သူငယ်ချင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးကျွန်တော်ကတော့ မွေးရပ်မြေကိုပြန်ဖို့သီရိမန္တာကားကြီးကွင်းကို တက္ကစီတစ်စီးနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့လက်ရှိရည်မှန်း ချက်ဖြစ်တဲ့ အမေနဲ့တွေ့ဖို့ရေး အပြေးအလွှားအသွား ကျွန်တော့ မျှော်လင့်ချက်တွေကိုရိုက်ချိုးလိုက်တာကတော့ကားဂိတ်ကဂိတ်မှူးဆိုတဲ့သူကိုပဲလို့ပြောလိုက်ချင်တော့တယ်ဗျာ။သင်္ကြန်အတွင်းကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပြေးဆွဲတဲ့ကားတွေအလုပ်မလုပ်ဖူးဆိုတာပါပဲ။အဲဒါကိုလဲ သိသိကြီးနဲ့ကိုကျွန်တော်အမေ့အိမ်ပြန်ချင်စောနဲ့မေ့နေခဲ့တာ။ကျွန်တော်အဖေအမေနဲ့တွေ့ဖို့မျှော်မှန်းချက်ကဒီနှစ်အတွက်တော့ဘယ်လိုမှဖြစ်မလာဘူး ဆိုတာသိလိုက်ရတော့တယ်ဗျာ။ကျွန်တော့်ရဲ့အမှတ်တရသင်္ကြန်တခုပေါ့၂၀၀၈သင်္ကြန်ရယ်။အသက်၂၁နှစ်သာရှိသေး တဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရွယ်တူသူငယ်ချင်းတွေပျော်မြူးဆော့ကစားနေတာမိဘညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူတူရှိနေတာ၊မိဘဆီကလက်ဝါးလေး ဖြန့်လိုက်ယုံနဲ့ပိုက်ဆံရနေတာ၊ချစ်သူခင်သူများနဲ့အတူတူရှိပြီးအမှတ် တရလေးတွေကိုဖန်တီးချင်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ရိုမတ်တစ်အတွေးလေးတွေကို အသက် ၂၁ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့လိုစစ်သားတွေလဲသူတို့လိုမပျော်ပါးချင်ပါဘူး၊မဖန်တီးချင်ပါဘူးလို့စာဖတ်ပရိတ်သတ်များထင်နေမည်လော?????အမေနှင့်တွေ့ချင်သော် လည်း မတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ ငါသည်စစ်သားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ရှေ့ဆက်ရင်း .
Posted by ရွှေလီသား at 03:47